Abazali be-JP Morgan Chase ye-CEO yeJamie Dimon Uluhlu lweePaki zabo zePark Avenue | - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Abazali be-CEO yeJP Morgan Chase uJamie Dimon Uluhlu lweePads zabo zePark Avenue
Abazali be-CEO yeJP Morgan Chase uJamie Dimon Uluhlu lweePads zabo zePark Avenue
Yonke intsapho yakwaDimon iyayithanda iPark Avenue.(Ifoto: Patrick McMullan)
Kubonakala ngathi lonke usapho lakwaDimon lulumkile xa kufikwa kumba wokubanjiswa kwezindlu eManhattan.
Ewe kunjalo, kunjalo. Theodore kwaye UThemis Dimon , Abazali baka-JP Morgan Chase ongusihlalo we-billionaire, umongameli, kunye ne-CEO uJamie Dimon, badwelise intsebenziswano yabo yePark Avenue $ 2.95 yezigidi . Ewe, ayiyiyo eyabo kuphela Indlu yePark Avenue. Igumbi elisandula ukulungiswa lomgangatho osibhozo likhangeleka liphuculwe.(Ifoto: Ngokuhambisa ngokufanelekileyo)
Umdala uDimons uthenge amagumbi okulala amabini, indlu yokuhlambela eyi-2.5 ngeedola eziyi-2.55 yezigidi kwi-2012. Kumele ukuba babe ngabalandeli abakhulu 650 Park Avenue , kuba kwiminyaka nje embalwa kamva, ngo-2014, bahlawula imali eyi- $ 2.55 yezigidi nge-1,650-square-foot inamagumbi okulala amathathu, iyunithi yokuhlambela eyi-2.5 kumgangatho wethoba (umgangatho omnye phezulu!) Kwisakhiwo esinye .
Ngaba bekukho iduplex afoot? Kwakubonakala kunjalo! Kodwa kuyabonakala ukuba, iiDimons zitshintshe ingqondo zaza zagqiba kwelokuba ziyibuyisele kwindawo yentengiso.
Ubuncinci ipali yomgangatho wethoba ikhutshiwe ukusukela oko babethathe i-2012: uluhlu, olugcinwe yi-Stribling brokers UPhyllis Mack kwaye UMichael Druckman , Ithembisa ukuba indawo ihlaziyiwe ngocoselelo, kwaye inezinto ezintle ezinjengegumbi lokutyela elivulekileyo, iibhafu zemabhile, kunye nekhitshi elibunjiweyo legranite elinombumba wesithsaba kulo lonke.
Ngokwendalo, iJP Morgan umenzi Unyana unepaki yePark Avenue, kwiPaki ye-1185 phakathi kwe-93rd kunye ne-94th Street. UJamie Dimon, omnye wabakhuseli abathethayo abathembekileyo kumzi mveliso oxabisa ixabiso lakhe liqikelelwa kwi-1.1 yeebhiliyoni zeedola, uchithe nje i-4.88 yezigidi zeedola kwi-co-op ngo-2004. umvuzo $ 20 yezigidi.
Ewe kunjalo, yile ndoda inye eyakha yaphendula kwizimvo zomhlalutyi webhanki ukuba abanye abathengi banokukhetha abo bakhuphisana nabo ngaphezulu kweJP Morgan nge, Yiyo loo nto ndisisityebi kunawe. Mhlawumbi kukwangu-acumen wakhe wokuthengiswa kwezindlu.
Ihlazo loMgcini weGetty uMarion oMgqumo oyiNyani oBuyile ngokuXela-Yonke iMemoir
Imisongo yoLwandle Olufileyo ibuyela umva kwiMyuziyam yakwa-Israyeli emva kweHiatus
'I-Bohemian Rhapsody': Bathini abaGxeki malunga noRami Malek njengoKumkanikazi uFreddie Mercury
'Ndadibana Njani Nonyoko' Umlingisi u-Ashley Williams uthenga i-UWS Co-op Apho uBabe Ruth ahlala khona
D'oh: uGoogle ususa i-Doodle engeyo-D-Day
U-Alec Baldwin Akasayi Kushiya Indlu Ye-Devonshire
UWarby Parker uya kunika i-NYC iZikolo zikaRhulumente zaBantwana eziSimahla zeGlasi zeHipster
U-Eminem: Umdaka omhlophe oMdaka uthanda ukuNcwaba kwakhe uMnyama
Nantsi Kutheni i-InfoWars 'yeNtanethi yezeMithombo yeendaba yeNtengiso Yeyona nto ibalaseleyo eyakha Yenzeka kwi-InfoWars
UHillary Clinton's 'Kwenzekeni' Uthengise iiKopi ezingaphezu kwama-300,000 kwiveki yokuqala
Indlela i-Australia eyabandakanyeka ngayo kwi-Reddit Plot yoMxhasi weTrump Ukugxotha uWill Smith
Iinyosi ezinkulu zilapha ukuSindisa ilizwe
Ngubani oza kulwa iimfazwe ze-Epic Lightsaber zeXesha lesi-2 'seMandalorian'?
umva iselfowuni ukukhangela igama lasimahla
Izinto ezili-10 wonke umntu ekufuneka ezazi
ukuthenga umsesane wokuzibandakanya kwi-intanethi
Fumanisa ukuba ngubani inombolo yefowuni yasimahla
Ngaba joe exotic usaphila
Olona hlobo lubalaseleyo lokuvelisa kwakhona kweenwele